Iyi Sarudzo Yemakabhati Makabati, Usambozvidemba Kuti Uitenge!
musha / Blog / Iyi Sarudzo Yemakabhati Makabati, Usambozvidemba Kuti Uitenge!
2020 / 10 / 11 kupatsanuraBlog 1008 0
Bathroom Bhizinesi Chikoro
Kana zvasvika kumabhati ekugezera, isu tese tinozviziva seyakajairwa yekugezera, iine mutoro unorema wekuchengetera mbichana. Ehezve, kana ukasarudza izwi rakanaka, kukosha kweiyo yekugezera zvakare kunogona kuvimba nako kuti riwedzere ruoko.
Saka kusarudzwa kwekamuri yekugezera hakugone kuve kushoma, kutanga kwezvose, kusvika pakukwanisa, kuchiteverwa zvakare kukodzera iyo yese yekushongedza yekushongedza maitiro, nezvimwewo, sarudza zvinongedzo zvinhu, zviri nyore kuvhiringidza vanhu.
Ungasarudza Sei Iyo Yekugezera Cabinet?
1. Sarudza Maererano Nemhepo yekugezera
Bathroom kabati ndiyo inokwezva kuvapo muchimbuzi, zvinogona kutaurwa kuti chakakosha zvigadzirwa zvepamusha kuratidza muridzi wekunaka uye kuravira. Saka chinhu chekutanga chekutarisa kana uchitenga kabhati yekugezera ndiwo maitiro eiyo yekugezera kabhodhi, inofanirwa kunge ichienderana nemhando yavo yekushongedza imba.
Nyowani Chinese Chitaera
Iyo nyowani yechiChinese maitiro haisi kopi yakapusa yeChinese dhizaini, asi musanganiswa wezvinhu zvechivanhu zvakaburitswa kubva kuChinese dhizaini uye zvazvino zvinhu.
Iyi dhizaini yekugezera kabhodhi inowanzo yakasimba huni sechinhu chikuru, mune dhizaini haizoshandisa yakaoma uye yakaoma pateni, asi kusarudza yakapfava geometric tambo. Zvekushandisa kwakawanda kweiyi dhizaini yekugezera kabati ichaonekwa yakanyanya kunaka tenzi.
Yemazuva Ano Minimalist Style
Yemazuva ano minimalist dhizaini yekugezera makabati anoteerera zvakanyanya kune anoshanda uye aesthetics. Naizvozvo, iyi dhizaini yemakabati makabhati anowanzo shandisa mavara akareruka pakuonekwa kweruvara, nepo basa rayo rekuchengetedza riine simba kwazvo, rinogona kunzi sarudzo yekutanga kumhuri diki.
Iyi dhizaini yekugezera kabati ikozvino inozivikanwa kwazvo pakati pevechidiki vadiki, nekuda kwayo yakapusa uye nerupo asi usarasikirwe nepfungwa yekugadzira, asi zvakare neakawanda emhando yeimba dhizaini akakwana machisi.
Maitiro eMediterranean anonyanya kupesana pamhando dzose dzekushongedza. Sezvo iyo Mediterranean dhizaini inouya kubva kuSpain's azure coast uye chena jecha mahombekombe, chena uye bhuruu ndiwo ayo makuru mavara. Uye aya maviri mavara anogona kugadzira inozorodza, yemahara kunzwa.
2.Choose Maererano To The Structure Design
Yakarembera Bathroom Cabinet
Akasimudzwa makabhati ekugezera ndiyo sarudzo inosarudzwa mudzimba zhinji. Nekuda kwekunyanya kugadzirwa kwayo pazasi, iyo inoparadzanisa kabhodhi kubva pasi, inonyatsoparadzira hunyoro uye hunyoro, ichidzivirira mukana wehunyoro hunopinda mudare.
Uye zvakare, iyo zvakare ine bhenefiti yekuwedzera iyo pfungwa yenzvimbo. Saka kunyangwe iri imba diki, yakaiswa neiyi yekugezera kabhodhi ine yakafanana nhevedzano yegirazi kabhineti, haizonzwa kuzara.
Pasi Pakamira Bathroom Makabati
Zvichienzaniswa nekurembera makabati ekugezera, mhando iyi yekamuri yekugezera haina chinodiwa kumadziro kana yaiswa.
Zvisinei, sezvo imba yekugezera yakanyorova kwenguva yakareba. Kunyanya kana imba isina kuoma uye kunyorova kusurukirwa, makabati epasi-kusvika-padenga anowanzo sangana nemvura, zvichikonzera kukuvara kune kabhodhi, zvichikanganisa hupenyu hwebasa.
Naizvozvo, kana uchitenga uriri makabhati makabhati, ive shuwa yekusarudza yakapetwa mativi isina mvura yekamuri yekugezera, nzira chete yekuona kuti chimiro chemukati chembare yekugezera kabati haina kuremara, kuitira kuwedzera hupenyu hwebasa.
3.Kuenderana neKusarudzwa kweKhabhinari
Inofananidzwa nezvimwe zvekugezera makabati, akasimba huni dzimba dzekugezera ndizvo chaizvo zvakatipoteredza zvine hushamwari uye zvine hutano, sezvo huni fanicha inowanzo gadzirwa yakananga kubva kune akasiyana huni sezvinhu zvakasvibirira.
Nekudaro, nekuda kwehukuru hweiyo yekugezera nharaunda, huni yerabha inowanzo shandiswa kugadzira makabhati ekugezera. Iyi huni inodonhedzwa uye kushayikwa nemvura, pamwe neimwe nzira yekudzivirira mvura kuti isapinda mvura uye hunyoro-chiratidzo.
Makabati eimba yekugezera akagadzirwa neichi chinhu anogona nyore kugadzira nzvimbo yekugezera neyekunzwa kwazvino uye zviri nyore kuchenesa. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve wakangwarira nezvinhu zvakapinza kuti udzivise kukuvara kubva pakugogodza panguva yekushandisa kwezuva nezuva.
Izvi zvinhu zvakanaka kwazvo anti-slip anti-scratch performance, inogona kunzi ndiyo yakanyanya kugadzirisa yekugezera kabati zvinhu.
Nekudaro, PVC zvinhu zvakare zvine kusagadzikana: kana iwe ukaisa zvinhu zvinorema pairi kwenguva yakareba zviri nyore kushanduka, saka saizi yakajairika yechinhu ichi chemuchina wekugezera ichave diki diki, inokodzera mhuri nhatu kushandisa.
Nzira Yekuchengeta Iyo Yekugezera Cabinet?
1.Bathroom Kabineti Kuchenesa
1, yekugezera kabhoni inopesana nemvura, kazhinji iine jira nyoro nyoro rinogona kupukutwa zvinyoro nyoro kudzivirira ngura inokonzerwa nemvura.
2, yakanakisa sipo yekushandisa isina kwayakarerekera, kushandiswa kwepasipo kwemazino ekugezesa mune yakanaka yekushambidza zvigadzirwa.
3, kabhaineti yekugezesa inowanzoiswa pane imwe sipo, vanochenesa uye zvimwe zvigadzirwa zvekuchenesa, kuyerera kwekushambidza kwesipo kwakanakisa kubvisa ipapo (kana muzvigadzirwa zvekuchenesa pazasi pejira remucheka).
2 Yekugezera Kabineti Kugadzirisa
Lacquer scuffs, isingabate pendi iri pasi pehuni, inowanikwa nekabhuruni inoratidzira krayoni imwe chete kana pigment, mune kabhineti ye trauma smear kuvhara iro rakavhenekerwa base color, uyezve yakajeka chipikiri polish yakatetepa yakaputirwa nhete inogona kuva.
3 Bathroom Cabinet Zuva Nezuva Shandisa Matipi
1, kabhodhi kabati iri mukubata, inofanirwa kusimudzwa zvishoma uye kuisa zvishoma, usaomese kudhonza; senge girazi remakurukota uye kusangana kwepasi, kunofanirwa kuve neshinda nezvinhu zvakapfava, kuti usapwanya; ivhu haritauri, rinofanira kunge rakasimba makumbo pad.
2, kuiswa kwemvura mupombi uye enda pombi yemvura kuti ubatanidze gobvu, uye inoda kugara uchiongorora kudzivirira kudonhedza kunokanganisa kabhodhi.
3, haizoshandise zvinhu zvakapinza zvakaoma kukwenya pamusoro pekabhineti, kuti isakonzere kukuvara kwepasirese kunokonzerwa nemvura yemvura.
4, kudzivirira yakajeka mwenje, kudzivirira kabati kubva mukukuvara. Chengetedza imba yacho mweya.
Masitaera akasiyanasiyana, masitayera akasiyana emakabati ekugezera anogona kugara achiunza iwe chakasiyana chiitiko. Izvo zviri pamusoro ndezvekusarudzwa uye kugadziriswa kwemakabati makabhati, ndinovimba zvichakubatsira.
Pakapfuura :: Yakangwara, isingataure, Crossover Inoenda Yakakura! Zvitsva Zvekunze Brands Bathroom Kuratidzwa Zvadaro: Iyi Sarudzo Yemakabhati Makabati, Usambozvidemba Kuti Uitenge!
4.95m2 MaScandinavia Maitiro, Iri Bhawa Yevaviri Vaviri Ndiro Rakatowanda St ...
Kohler Anotora Inonyatsozivikanwa Smart Bathroom Kambani KuDare Kune Kupfuura $ 1.4 ...
Akangwara, Asingatauri, Crossover Inoenda Yakakura! New Yekunze Brands Bathroom Ex ...